ဖာဂူဆန်ရဲ့ အကြံပေးချက်ကိုမသုံးလို့ PSG ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်းပြောလာတဲ့ ဆိုးရှား….. – FBV SPORT NEWS
ဖာဂူဆန်ရဲ့ အကြံပေးချက်ကိုမသုံးလို့ PSG ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်းပြောလာတဲ့ ဆိုးရှား…..
December 4, 2020 By admin Sports News
ဖာဂူဆန်ရဲ့ အကြံပေးချက်ကိုမသုံးမလို့ PSG ကိုရှုံးကြောင်းပြောလာတဲ့ ဆိုးရှား…..
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ယမန်နေ့ည က PSG အသင်းကို အိမ်ကွင်း အိုးထရက်ဖို့စ်မှာ လက်ခံကစားခဲ့ပြီး ၃-၁ ဖြင့် ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ပြီး သမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုးတခုကို ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်….
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးရှားလ်ကို ကျနော်တို့ မန်ယူ ဂန္တဝင်နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်မှ နည်းစနစ်ပိုင်များကို နောက်ကနေကူညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းများကတော့ မန်ချက်စတာနံနက်ခင်းသတင်းများမှာ ထွက်လာခဲ့ပြီးပါပြီ…..
ဒီသတင်းများကို ထပ်ပြီး အတည်ပြုပေးလိုက်တာကတော့ ဆိုးရှားလ်ရဲ့ နောက်ထပ် ဖာဂူဆန်ရဲ့နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို အရင်ပွဲများမှာ အကူညီရယူနေတယ်ဆိုတာကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုလိုက်သလိုပါဘဲ……မန်ယူ နည်းပြဆိုးရှားလ်ဟာ PSG ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ ကျနော်ဟာ အသင်းသားတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီး ဖာဂူဆန်ရဲ့ နည်းဗျူဟာကို လစ်လျူရှုလိုက်မိပါတယ်….
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖာဂူဆန်က ပွဲမတိုင်ခင်မှာ PSG အသင်းဟာ တိုက်စစ်အတက်အဆင်းတွေဘယ်လိုမြန်ဆန်ကြောင်း သူတို့ကို တန်ပြန်တိုက်စစ်နဲ့ မရကြောင်းကိုပြောပါတယ်….နောက်ပြီးတော့ တောင်ပံတိုက်စစ်တွေနဲ့ ဖိအားပေးကစားဖို့ ကာဗာနီ ကို ဂိုးသွင်းခွင့်ပိုရဖို့ တောင်ပံတိုက်စစ်တွေကို အလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်..
မာရှယ်ကို မထည့်ဘဲ မာတာနဲ့ အစားထိုးသင့်ကြောင်း မာတာဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အတွေ့အကြုံများတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့ PSG နောက်တန်းကို အလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်…..နောက်တန်းကိုလည်း ကွင်းလယ်အထိဘောလုံးကို ကိုင်ပြီးမဆော့ခိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့မိတယ်……လို့ဆိုးရှားလ်က မန်ချက်စတာ ညနေခင်းသတင်း မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်….
နောက်ပွဲတွေမှာ ဖာဂီကို မိမိကစားသမားတွေထက်ပိုယုံတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို လည်း ထပ်လောင်းပြောကြားရင်း နိုင်ပွဲတွေပြန်လည်ရယူသွားမယ်လို့ မန်ချက်စတာပရိတ်သတ်တွေကို ကတိပေးခဲ့ပါတယ်…..